Arakan Eagle: February 2013
Posted by Eagle info dash at 16:09 No comments:
Posted by Eagle info dash at 12:25 No comments:
= = = အစ္စလာမ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုများ = = = (၁) ဖိလိပိုင်နိုင်ငံ - မိုရို အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး (အမ်အန်အယ်လ်အက်ဖ်) Moro National Liberation Front (MNLF)
ဘရီတန်းနီးကား စွယ်စုံကျမ်း ဆောင်းပါး (၂၀၁၀)
လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရက်တစ် အစ္စလာမ် တိုင်းပြည်တစ်ခု တည်ထောင်ဖန်တီးရန် လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြောက်ကျား နည်းဗျူဟာများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို အသုံးပြုသော ဖိလိပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှ မူစလင် ခွဲထွက်ရေး လှုပ်ရှားမှု
Muslim separatist movement in the southern Philippines that has employed guerrilla tactics and violence in its campaign for the creation of an independent democratic, Islamic state.
မင်ဒါနာအို ကျွန်းနှင့် ဖိလိပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ အခြား ကျွန်းများမှ မူစလင်ဘာသာဝင် မိုရိုလူမျိုးတို့၏ အမည်ကို ယူထားသော MNLF သည် သမ္မတ ဖာဒီနန် မာကို့စ်က စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး မကြာမီ (၁၉၇၃)မှ စတင်၍ ဖိလိပိုင်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သော သောင်းကျန်းမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
Taking its name from the Muslim Moro peoples of Mindanao and other southern islands of the Philippines, the MNLF led an insurgency against the Philippine government that began in 1973, soon after President Ferdinand Marcos imposed martial law.
MNLF ၏ စုစည်းမှုအားကောင်းပြီး ရှုပ်ထွေးပွေလီသော Bangsa မိုရို စစ်တပ် ဟု သိကြရသော စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့တွင် (၁၉၇၀)ခုနှစ်များက အင်အား အတောင့်တင်းဆုံး အချိန်တွင် တိုက်ခိုက်ရေး သမား (၃၀,၀၀၀) ရှိသည်။ (၁၉၇၅) ခုနှစ်တွင် မာကို့စ်သည် မိုရိုတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နစ်နာမှုများကို ကုစားပေးခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးအားဖြင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် မြေပိုင်ရှင်များကို ဆန့်ကျင်လျှက် ညီမျှမှုရှိအောင် ညှိပေးခဲ့သည်။ သို့သော် အစိုးရ၏ ဒေသဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ကမ်းလှမ်းမှုများကို MNLF က ပယ်ချခဲ့ပြီး မိုရိုကျွန်းများ အပြည့်အ၀ လွတ်လပ်ရေး ရရန်အတွက် ဆက်လက် တောင်းဆိုနေခဲ့သည်။
The MNLF's well-organized and sophisticated military force, known as the Bangsa Moro Army, had 30,000 fighters at the time of its greatest strength in the 1970s. In 1975 Marcos conceded that the Moros' economic grievances, at least, were justified, particularly against Christian landowners; but government offers of regional autonomy were rejected by the MNLF, which continued to demand complete independence for the Moro islands.
MNLF သည် မင်ဒါနာအိုတွင် ကျင်းပသော ရွေးကောက်ပွဲများကို သပိတ်မှောက်ခဲ့ပြီး National Society Movement အား ဥပဒေပြုမှုဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ခွင့်ကို ပေးခဲ့သည်။ (၁၉၇၀)နှစ်များ အတွင်း မိုရို အစ္စလာမ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး (MILF) နှင့် Bangsa မိုရို လွတ်မြောက်ရေး အစည်းအရုံးတို့ ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေသော ပြိုကွဲမှု အပါအ၀င် အကွဲအပြဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် အားနည်းသွားခဲ့သည်။
The MNLF boycotted elections in Mindanao, giving legislative control to the National Society Movement. The organization subsequently was weakened byaseries of factional splits, including breaks in the 1970s that resulted in the formation of the Moro Islamic Liberation Front (MILF) and the Bangsa Moro Liberation Organization.
(၁၉၈၁)ခုနှစ် အစပိုင်းတွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ ရုပ်သိမ်းလိုက်သော်လည်း ပြောက်ကျား လှုပ်ရှားမှု ဆက်လက်ရှိနေခဲ့သည်။ (၁၉၈၁)ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် MNLF သည် အစိုးရတပ်များအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ပါတာကျွန်းပေါ်၌ တပ်သား (၁၂၀)ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤအုပ်စုသည် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်များ အပြင် ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် အခြားသူများကို ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပြီး ဓားစားခံများအတွက် ပြန်ပေးငွေ တောင်းခံခဲ့သည်။
Although martial law was lifted at the beginning of 1981, guerrilla activity continued. In February 1981 the MNLF attacked government forces, killing more than 120 troops on the island of Pata. In addition to violent attacks, the group also kidnapped Roman Catholic bishops, foreigners, and others and made ransom demands for their hostages.
(၁၉၈၆)ခုနှစ်တွင် မားကို့စ်သည် ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကြောင့် အာဏာ စွန့်ခဲ့ရသည်။ သမ္မတသစ် ကိုရာဇန်အာကွီနို နှင့် MNLR ခေါင်းဆောင် Nur Misuari တို့သည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အလျှင်အမြန် စီစဉ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး (၁၉၈၇)ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် MNLF က ဒေသဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဘက်သို့ ပြန်လှည့်ကာ လွတ်လပ်သော တိုင်းပြည်အဖြစ် တောင်းဆိုမှုကို စွန့်လွှတ်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။
In 1986 Marcos was forced from power byapopular revolution. The new president, Corazon Aquino, and the leader of the MNLF, Nur Misuari, quickly arranged foracease-fire, and in January 1987 the MNLF agreed to drop its demand for an independent state in return for regional autonomy.
သို့ရာတွင် MILF က သဘောတူညီချက်ကို လက်မခံဘဲ ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံ အုပ်စုများအကြား ဆွေးနွေးမှုများ ပျက်ပြားသွားခဲ့သည်။ (၁၉၈၈)ခုနှစ်တွင် MNLF က အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားခြင်းကို ရပ်စဲလိုက်သည်။ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများ ပျက်ပြားခြင်းနှင့် ဆက်လက် တိုက်ခိုက်ခြင်းများ ဖြစ်နေလင့်ကစား အစိုးရက မူစလင်ဘာသာ ကိုးကွယ်သော မင်ဒါနာအို အတွက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေ ထူထောင်ရန် လမ်းဖွင့်ပေးသော ဆန္ဒခံယူပွဲများကို (၁၉၉၀)ခုနှစ်က ကျင်းပပေးခဲ့သည်။
However, the MILF refused to accept the agreement, and discussions between the government and opposition groups broke down. In 1988 the MNLF officially lifted its cease-fire. Despite the breakdown in the talks and the continued fighting, the government held referendums that led to the establishment of an autonomous region for Muslim Mindanao in 1990.
တိုက်ပွဲငယ်ကလေးများ နှစ်ပေါင်း များစွာ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဖိလိပိုင်သမ္မတ ဖီဒယ်ရာမို့နှင့် Misuari တို့သည် (၁၉၉၆)ခုနှစ်၌ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်တစ်ခု ရရှိခဲ့သည်။ ယင်းနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် Misuari သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ဒေသ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည်။ သို့ရာတွင် MNLF နှင့် အစိုးရအကြား ပဋိပက္ခများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျှက် (၂၁)ရာစုအတွင်းသို့ ၀င်ရောက် လာခဲ့သည်။ (၂၀)ရာစု၏ နောက်ဆုံး ဆယ်စုနှစ် သုံးခုအတွင်း မိုရို အကြမ်းဖက် အုပ်စုများနှင့် အစိုးရအကြား တိုက်ခိုက်မှုများတွင် လူသေဆုံးမှုပေါင်း (၁၀၀,၀၀၀) ရလာဒ် ထွက်ခဲ့သည်။
After several more years of skirmishes, Philippine President Fidel Ramos and Misuari concludedapeace accord in 1996. Later that year, Misuari was elected governor of the autonomous region. However, clashes between the MNLF and the government continued into the 21st century. During the last three decades of the 20th century, the fighting between Moro guerrilla groups and the government resulted in about 100,000 deaths
Posted by Eagle info dash at 11:53 No comments:
Posted by Eagle info dash at 12:24 No comments:
Posted by Eagle info dash at 12:23 No comments:
Posted by Eagle info dash at 12:21 No comments:
(((၈၈' ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကို မင်းကိုနိုင်မှ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိ ဟှုပြတ်ပြတ်သာ:သာ:ပြောကြားသွားသည်
*** ( ၂၁.၀၂.၂၀၁၃ ) နေ့ဒိန်းမတ် ၌ ရခိုင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ( peace ) အကြောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် " မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခံယူထားသူ ( ဘန်ကာလီ ) တဦး မှ မေးရာ" မေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်မှ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိမှန်းကိုသိ သိကြီးနဲ့မေးတယ်လို့နားလည်ပါသည်။" " လူမျိုးစု၁၃၅မျိုးထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာမပါဘူးဆိုတာယနေ့၁၃၅မျိုးလုံးကိုဖတ်ဖူးသူတိုင်းသိပါသည်ဟု" ၈၈' ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်မှပြတ်ပြတ်သာသာပြောကြားသွားသည်။***
Posted by Eagle info dash at 09:29 No comments:
Posted by Eagle info dash at 10:26 No comments:
Labels: နိုင်cံရေး, သမိုင်း
အရှေ့တောင်အာရှဒေသ အယ်ကေဒါကွန်ယက် (ဒေါက်တာ ရိုဟန် ဂုဏ ရတန) = = = (ဘာသာပြန် - ၅)
ဒေါက်တာ ရိုဟန် ဂုဏရတန သည် အကြမ်းဖက်မှု လေ့လာရေး ပါရဂူ ဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် ရှိသော ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ အကြမ်းဖက် အုပ်စုများ အပါအ၀င် အစ္စလာမ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများကို အိုစမာ ဘင်လာဒင်၏ အယ်လ်ကေဒါအဖွဲ့က ကွန်ယက်ဖွဲ့ ထိန်းချုပ်ထားသည့် အကြောင်း သူ၏ ဟောပြောချက် ဖြစ်ပါသည်။ ဟောပြောသော နေ့စွဲကို ရှာမတွေ့သေးပါ။ (၂၀၀၃ - ၂၀၀၄)လောက်ကဟု ခန့်မှန်းပါသည်။
Al Qaeda’s Network in Southeast Asia
အယ်လ်ကေဒါ၏ ကမ္ဘာလွှမ်းခြုံ ထီး
အယ်လ်ကေဒါ ကိုယ်တိုင်မှာ ကမ္ဘာလွှမ်းခြုံ ထီးတစ်လက်ရှိပါတယ်။ အယ်လ်ကေဒါရဲ့ ကမ္ဘာလွှမ်းခြုံထီးရဲ့ နာမည်ကတော့ ဂျူးများနှင့် ခရစ်ယာန် တပ်သားများအား ဆန့်ကျင့်သော ကမ္ဘာ့အစ္စလာမ် တပ်ဦး ဖြစ်ပြီး (၁၉၉၈)ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ ဂျူးများနှင့် ခရစ်ယာန် တပ်သားများအား ဆန့်ကျင့်သော ကမ္ဘာ့အစ္စလာမ် တပ်ဦးကို ဖန်တီးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အိုစမာ ဘင်လာဒင်က အရှေ့အလယ်ပိုင်းက၊ အာဖရိက က၊ အာရှက၊ ပြီးတော့ ကော့ကေးဆပ်ဒေသက တစ်ကွဲတစ်ပြားစီ ဖြစ်နေတဲ့ အစ္စလာမ် အဖွဲ့အစည်းများကို လှုပ်ရှားသက်ဝင်စေမယ်လို့ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ယုံကြည်လို့ပါပဲ။ သူက ပေါင်းစည်းထားတဲ့ အားထုတ်မှုကို ရချင်ပါတယ်။ အိုစမာဟာ ဂျီဟတ် လှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်တုံးကမှ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါဘူး။ အိုစမာဟာ အမြဲတမ်း နောက်ကွယ်ကနေပြီး ထောက်ကူမှုပေးရင်း၊ မဟာဗျူဟာ နဲ့ သဘောတရားရေးရာ ညွှန်ကြားချက်တွေ ပေးရင်း နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အဲဒီ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကို သူ တည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက် အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Al Qaeda’s Global Umbrella
Al Qaeda itself hadaglobal umbrella. The name of the al Qaeda global umbrella was the World Islamic Front for Jihad Against the Jews and the Crusaders Organization created in February 1998. The reason the World Islamic Front for Jihad Against the Jews and the Crusaders was created was because Osama bin Laden firmly believed in mobilizing the disparate Islamist organiz- ations in the Middle East, in Asia, in Africa and in the Caucuses. He wanted to haveaunified effort. Osama never aspired to be the leader of the jihad struggle. Osama al- ways was in the background giving assist- ance and giving strategic and ideological direction. And that was the principal reason he was able to build that coalition.
အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာ - အရှေ့တောင်အာရှက ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ဒီအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြပါတယ်။ ဟမ်ဘာလီဟာ အယ်လ်ကေဒါရဲ့ ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။ ရာဘစ်တူတယ် မူဂျာဟစ်ဒင် အစည်းအဝေး ကျင်းပပေးတယ်။ အဲဒီ အစည်းအဝေးတွေမှာ ဖိလိပိုင်နိုင်ငံက အမ်အိုင်အယ်လ်အက်ဖ် [မိုရို အစ္စလာမ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး] နဲ့ အေအက်ဂျီ [အဘူဆာယက် အုပ်စု]၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံက လက်စ်ကာ ဂျန်ဒူလာဟ်၊ ဂျေအိုင် [ဂျမ်မား အစ္စလာမီးယား] နဲ့ ဂျမ်းမား ဆလာဖီးယား တို့ပါဝင်ကြပါတယ်။ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်ကာပူနဲ့ ဖိလိပိုင်နိုင်ငံတို့က ဂျေအိုင် ခေါင်းဆောင်တွေ လည်းပဲ အဲဒီ အစည်းအဝေးတက်ကြပါတယ်။ အဲဒီအပြင်ကို ကျွန်တော်တို့ မြင်ရတာက မြန်မာနိုင်ငံက အာရ်အက်စ်အို နဲ့ အာနို တို့က ကိုယ်စားလှယ်တွေ အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ ပါဝင်တက်ရောက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
In Southeast Asia, the Southeast Asian leaders also did the same. Hambali was al Qaeda’s point man, convened the Rabitatul Mujahidin meeting, which was partly parti- cipated by representatives from MILF and ASG in the Philippines, Laskar Jundullah from Indonesia, JI, and Jemaah Salafia. Also, JI leaders from Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapore and the Philippines participated in that meeting. Other than that, we saw representatives from the RSO and the ARNO from Myanmar, partici- pating in that meeting.
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကက်ရှမီးယားမှာ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ပါကစ္စတန်အုပ်စု ဖြစ်တဲ့ လက်ကာ အီ တိုဘာ ဆိုတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ အုပ်စု တစ်ခုဆီက အလည်အပတ် လာပြီး ပါဝင်တက်ရောက်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ထား ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ကိုယ်စားလျယ်ဟာ မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ သိရတာက ဂျေအိုင် အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကက်ရှမီးယားကိုတောင်မှ လည်ပတ်ပြီးသွားပါပြီ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် - ဂျေအိုင် အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ ကက်ရှမီးယားကို လည်ပတ်ခဲ့ပြီး လက်ရ်ှကာ အီ တိုဘာ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အက်ဇတ် ကက်ရှမီးယားနယ်နဲ့ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
We also expectedavisit fromaSoutheast Asian group that is from Lashkar-e-Toeba,aPakistani group fighting in Kashmir to participate, but this particular representative could not come. And subsequently, we learned that JI members had even visited Kashmir. For instance,aJI member had visited Pakistan and Kashmir and had dis- cussions with the Lashkar-e-Toeba leaders in Azzad Kashmir and in Pakistan.
Posted by Eagle info dash at 09:17 No comments:
မူရင်းစာရေးသူ = Rick Heizman
ဘာသာပြန်သူ = ဇွဲသစ် (ရမ္မာမြေ)
အံ့ဩဖွယ်ရာ လိမ်လည်မှု၊ အဖြစ်မှန်ကို ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်ယွင်းအောင် လုပ်ဆောင်မှု၊ မရိုးဖြောင့်မှုတို့ကြောင့် (ဤမှတ်တမ်းဗီဒီယိုကို) ‘လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဟု လွဲမှားစွာ စွပ်စွဲနိုင်စေရန် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ကြိုတင်ကြံစည်မှုအစီအစဉ် (The Hidden Agenda to falsely charge Genocide)’ ဟု ခေါ်ဆိုသင့်သည်။
တကယ့်ပြဿနာကို မသိသူများက ဤသို့သော မှတ်တမ်းဗီဒီယိုကို အမှန်ဟု ထင်ကောင်းထင်ကြပေလိမ့်မည်။ သို့သော် သမိုင်းကြောင်းကို ဂဃနဏ သိရှိထားသူများက ဤမှတ်တမ်းဗီဒီယို၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းသည် ရခိုင်ဗုဒွဘာသာဝင်များ၊ (ဒေါ်)အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗုဒ္ဒဘာသာ၊ ဗုဒ္ဒဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ဗုဒ္ဒအတွေးအခေါ်အယူအဆကိုပါ ရှုံ့ချပြီး၊ အပုပ်ချဖို့ ကြိုးစားထားသည့် အကွက်ကျကျကြိုတင်ကြံစည်လုပ်ဆောင်မှုကြီးကို ယုံကြည်လာအောင် လူအများကို လှည့်စားအယုံသွင်းရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း အလွယ်တကူ သိမြင်နားလည်နိုင်ပေသည်။
(‘ရခိုင်’ နှင့် ‘ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်’ ဟူသော ဝေါဟာရများသည် လက်ခုပ်နှင့်လက်ဝါးလို တသားတည်းဖြစ်ပါသည်။
‘ရိုဟင်ဂျာ’၊ ‘မူဆလင်’၊ ‘ဘင်္ဂါလီ’၊ ‘ဘင်္ဂါလီမူဆလင်’ ဟူသော စကားလုံးများသည် ထည်လဲသုံးစွဲနိုင်သော ဝေါဟာရများဖြစ်သည်။
လက်ရှိပြည်နယ်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် (သို့) အာရကန် (Arakan)ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။)
(အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြစ်စေရန် နောက်ခံစကားပြောမှုကို (း၂၈) စက္ကန့်တွင် စတင်ပါသည်။)
(း၄၅) ဗီဒီယိုဖိုင်အရ ‘နောက်ဆက်ဖြစ်သော အရာများမှာ ဖုံးကွယ်ထားခဲ့သော အရာများဖြစ်သည်။’ ဟုဆိုသည်။ နောက်ဆက်ဖြစ်သော အရာများမှာ ဖုံးကွယ်ထားခဲ့သော အရာများ (လုံးဝ) မဟုတ်ပါ။ ဆူပူမှုများနှင့် ဆိုးဝါးပြီး၊ ဖြတ်တောက်ထားသည့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကြောင့် ရခိုင်အကြောင်း သော်လည်းကောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းသော်လည်းကောင်း သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ရန်မှာ ခက်ခဲလှပါသည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် ဖုံးကွယ်ထားသည်မှာ ရိုဟင်ဂျာများက သူတို့ကို ဒုက္ခသည်များအဖြစ်မြင်သွားစေရန် ကြံစည်စီမံထားမှုပင် ဖြစ်ပေသည်။ လက်တွေ့တွင် မူဆလင်များက သူတို့ဘာသာဝင်သက်သက်အတွက် လိုချင်ခဲ့သော နိုင်ငံထဲမှ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ရခိုင်လူမျိုးများကို နှင်ထုတ်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
(၁း၀၅) ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် လမ်းပေါ်မှ လူအုပ်စုတစ်စုက အိမ်ပြတင်းပေါက်များကို ခဲနှင့် ပေါက်နေကြပုံကို ပြထားသည်။ (ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ထည့်သွင်းထားပုံအရ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များက မူဆလင်များကို တိုက်ခိုက်နေသယောင် လူအများကို ထင်မြင်သွားစေရန် ဖန်တီးထားသည်။) သို့သော် အမှန်မှာ ထိုဗွီဒီယိုဖိုင်သည် ၂၀၁၂ - ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့က မောင်တောမြို့တွင် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များကို မူဆလင်များက တိုက်ခိုက်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။
(၁း၃၅) ဗီဒီယိုဖိုင်အရ ‘ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်များကို သူတို့၏ ဇာတိချက်မြှုပ်နိုင်ငံမှ မောင်းထုတ်ခံနေရသည်။’ ဟု ပြောထားသည်။ သို့သော် အမှန်က ရိုဟင်ဂျာအများအပြားကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ သို့တည်းမဟုတ် သူတို့၏မိဘများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင် နှင့် ရသေ့တောင်တို့မှ လူဦးရေသည် နှစ်ခြောက်ဆယ်အတွင်းတွင် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်အများစုအခြေအနေမှ မူဆလင်အားလုံးနီးပါးအခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ၎င်းမူဆလင်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်လာမစဲတသဲသဲ ဖြစ်နေသော မူဆလင်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
(၂း၀၀) ဗီဒီယိုဖိုင်အရ ‘ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်မှ ကွယ်ပျောက်သွားအောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ တစ်ချို့တွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။’ ဟူ၍ ပြောသည်။ (၎င်းမှာ) မဖွယ်မရာလှုံ့ဆော်သော မဟုတ်တမ်းတရားသာ ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာထက်ဝက်ကျော်သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ ဆော်ဒီအာရေဘီးယား၊ ပါကစ္စတန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများစသည့်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြင်ပတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ထုတ်ပြန်ချက်သည် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရိုဟင်ဂျာများကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန်ဖြစ်သည်ဟူ၍ ညွှန်းဆိုနေသလို ဖြစ်နေသည်။
(၂း၁၀) ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် (သူတို့ပြောလိုသော) အယူအဆကို မီးလောင်ရာလေပင့် ပေးနိုင်ရန် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု (Genocide) ဟူသော စကားလုံးကို သုံးစွဲလိုက်ပြန်ပါသည်။ ကောင်းပြီ။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု (Genocide) အကြောင်းကို ပြောကြပါစို့ရဲ့။ ဗီဒီယိုတွင် သမိုင်းတွင်တင်ကျန်ပြီး၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာအပြည့်အစုံနှင့် စာတင်ပြီးဖြစ်သည့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု အစစ်အမှန်များကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ဖော်ပြမထားပေ။ ၁၉၄၂ - ခုနှစ်က ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း (မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့) ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသော ဂျပန်များကို တိုက်ခိုက်ရန် အင်္ဂလိပ်များက ဘင်္ဂါလီမူဆလင်လူနည်းစု (ရိုဟင်ဂျာဟူသော ဝေါဟာရကို ထိုအချိန်က အသုံးမပြုခဲ့သေးပါ။) ကို လက်နက်များကိုင်ဆောင်စေခဲ့သည်။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်များ ဆုတ်ခွာသွားကြသောအခါ ဘင်္ဂါလီများက ထိုလက်နက်များကို အသုံးပြု၍ ဂျပန်များကို မတိုက်ခိုက်ခဲ့။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ရွာပေါင်း (၄၀၀) ကျော်ကို မီးရှိူ့ခြင်း၊ ရခိုင် (၃၀၀၀၀) ကို သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု (Genocide) ကို စတင်ဖို့အတွက်သာ ထိုလက်နက်များကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာများက ဂျီဟတ်(မြင့်မြတ်သောအစ္စလာမ်ဘာသာရေးစစ်ပွဲ) ဆင်နွှဲရန် မူဂျာဟစ်(အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက် တိုက်ခိုက်သော မြင့်မြတ်သည့်စစ်သည်တော်) အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းလျှက် မူဆလင်ဘာသာဝင်များချည်းရှိမည့် သီးခြားနိုင်ငံ၏ ပန်းတိုင်များကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြေညာခဲ့ကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်များနှင့် ဗလီဆရာများ၏ ပြောဆိုမှုများမှာလည်း ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပစ်ဖို့သာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောဆိုမှုသည် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု(Genocide)ပြုလုပ်ရန် ရိုဟင်ဂျာများအား အားပေးအားမြှောက်ပြုရာ ရောက်သွားပေသည်။ သာဓကအနေဖြင့် (၁၉၈၅) ခုနှစ်တွင် ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (RLO = Rohingya Liberation Organization) ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ အာမက်ရှာ (Ahmed Shah) က မူဆလင်မဟုတ်သူများကို မောင်တောခရိုင်မှ မောင်းထုတ်ရန် မောင်တောခရိုင်အတွင်းမှ ဘင်္ဂါလီများကို သူ၏အသံသွင်းထားသော ကက်ဆက်တိတ်ခွေများကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့် မောင်တောမြို့မှ ရခိုင်ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များနှင့် မူဆလင်မဟုတ်သူများကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခြင်း (Genocide) ပြုလုပ်ရန် ဆော်ဩနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
(၃း၁၀) ဗီဒီယိုဖိုင်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်၏လူဦးရေမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် (၁,၀၀၀,၀၀၀) နှင့် မူဆလင် (၈၀၀,၀၀၀) ခန့် ရှိကြောင်း ပြောသည်။ အမှန်တရားနှင့် အလှမ်းဝေးလွန်းလှပါသည်။ (အမှန်မှာ) ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် သုံးသန်းခန့် နှင့် မူဆလင် (၈၀၀,၀၀၀) ခန့် ရှိပါသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်၍ အလုံးအရင်းဖြင့် ၀င်ရောက်နေထိုင်လာသူများကြောင့် မူဆလင်လူဦးရေသည် အလွန်လျှင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာပါသည်။ ဗီဒီယိုဖိုင်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မူဆလင်နှင့်ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တို့မှာ အရေအတွက်အတူတူနီးပါးရှိပြီး၊ ရခိုင်ပြည်သည် ရခိုင်ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တို့၏ ဇာတိချက်မြှုပ်ဒေသ ဖြစ်သကဲ့သို့ ရိုဟင်ဂျာများ၏ ဇာတိဒေသ၊အမိမြေဖြစ်ကြောင်း လူအများကို တွေးထင်သွားစေအောင် ကြိုးစားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် လူဦးရေအကြောင်းကို ဖော်ပြသည့်အခါတိုင်း သောက်သောက်လဲ မှားနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရခိုင်ပြည်ကို ရိုဟင်ဂျာများ၏ အမိမြေ၊ မွေးရာဇာတိနိုင်ငံဟူ၍ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် ခေါ်ဆိုထားခြင်းမှာလည်း မမှန်ကန်ပါ။ ဤအချက်မှာ ကာလကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ အမှားကို အမှန်ထင်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် အကွက်ကျကျ လုပ်ဆောင်သွားကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ (ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍) မေးခွန်းရိုးရိုးလေးတစ်ခုသာမေးပါမည်။ ‘ရိုဟင်ဂျာများ မည်သည့်ဘာသာစကားကို ပြောဆိုကြသနည်း။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလူမျိုးများ မည်သည့်ဘာသာစကားကို ပြောဆိုကြသနည်း။’ ဟူ၍ပင်။ အဖြေမှာ ‘(သူတို့အားလုံးသည်) ဘင်္ဂါလီစကားကို ပြောဆိုကြသည်’ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ‘ဘင်္ဂါလီစကား’ ဟုခေါ်ဆိုရခြင်းမှာ ၎င်းဘာသာစကားသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်အပိုင်း နှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့မှ လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အလားတူ သူတို့ (ရိုဟင်ဂျာများ) သည်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်အပိုင်း နှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့မှ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
(၃း၄၅) ဗီဒိယိုဖိုင်အရ ‘ရခိုင်ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေက ရိုဟင်ဂျာတွေကို ‘ဘင်္ဂါလီများ (သို့) ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များ’ လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတာကို ပိုပြီးလိုလားကြပါတယ်။’ ဟူ၍ ပြောထားသည်။ ဆိုလိုချင်သည်မှာ သူတို့ကို ‘ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များ’ ဟုခေါ်ဆိုခြင်းမှာ မှားယွင်းနေကြောင်း ပြောလိုရင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤအချက်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့က သူတို့ကို ထိုအမည်ဖြင့်ပင် သိရှိထားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ထိုအမည်နာမဖြင့်သာ သိရှိထားခဲ့ကြသည်။ (ထိုအချိန်က) သူတို့တွင် ရိုဟင်ဂျာ ဟူသော ဝေါဟာရ မရှိသေးပေ။ သူတို့၏ဇာစ်မြစ်မှာလည်း ဘင်္ဂလားဒေသ ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ပြောဆိုသော ဘာသာစကားမှာ ဘင်္ဂါလီစကားဖြစ်ပြီး၊ သူတို့စားသော အစားအစာမှာလည်း ဘင်္ဂါလီအစားအစာသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များက သူတို့သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သည့်ဘာသာစကားကို ပြောဆိုကြောင်း၊ မည်သည့်ဘာသာတရားကို ယုံကြည်သက်ဝင်ကြောင်း လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို ရှင်းလင်းသိသာနေခဲ့ပါပြီ။ နောက်ပိုင်းတွင် သူတို့ထဲမှ အချို့က ‘ဘင်္ဂါလီမူဆလင်’ ဟူသော ဝေါဟာရသည် သူတို့၏ ဇာစ်မြစ်နေရာဌာနကို ပြညွှန်းနေကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်လာကြသဖြင့် ‘ရိုဟင်ဂျာ’ ဟူသည့်ဝေါဟာရကို ဖန်တီးပြီး၊ လိမ်ညာဖန်တီးထားသော သမိုင်းသစ်တစ်ခုကိုပါ ပေါ်ထွက်လာစေခဲ့ပါသည်။
(၅း၀၀) ဗီဒီယိုဖိုင်အရ (၎င်းဗီဒီယိုဖိုင်တွင်ပါသော) အမျိုးသမီးက ရခိုင်လူမျိုးများဆိုလျှင် ကလေးငယ်များကပင် မူဆလင်များကို တွေ့တိုင်း ခဲနှင့် ပစ်ပေါက်သည်ဟု သွယ်ဝိုက်ပြောဆိုထားသည်။ (၎င်းမှာ)လုံးဝ မှားယွင်းကြောင်း ပြောလိုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော မှတ်ချက်သည် ရခိုင်ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များကို သူရဲသဘက်အလား ထင်မှတ်မှားသွားလောက်အောင် ရည်ရွယ်ပြောဆိုထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင် ကျေးလက်ဒေသများတွင် စာတမ်းပြုစုရန် သုတေသနပြုလုပ်ရင်း ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြားသောဒေသများတွင် (၂)နှစ်ခန့်ကြာကြာ ဥဒဟိုသွားလာနေထိုင်ခဲ့သော ကာလတလျှောက် ထိုကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်မျိုးကို မတွေ့ခဲ့ရပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုလည်း ဘယ်သောအခါမှ မကြားဖူးခဲ့ပါ။ (ထို့ကြောင့်) သူမပြောသောစကားကို သက်သေအထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာ မပြဘဲ မယုံကြည်နိုင်ပါ။
(၅း၄၅) ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ‘ရခိုင်အမျိုးသားပါတီတစ်ခု’ ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖော်ပြသည်။ ထို့ပြင် ရခိုင်လူမျိုးများက မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ၊ ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို အသိအမှတ်ပြုရဲ၊ ဂုဏ်ယူရဲလောက်အောင်အထိ ရဲတင်းမှုအတွက် ရခိုင်လူမျိုးများကို သူရဲသဘက်အလား အထင်မှားသွားစေရန် ‘အမျိုးသားရေး(Nationalist)’ ဟူသောစကားလုံးကို နောက်ခံစကားပြောသူက အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန် အမြင်ကတ်သည့် လေသံဖြင့် ပြောသွားသည်။ ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ရိုဟင်ဂျာစည်းရုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့(RSO) နှင့် အာရကန်ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တပ်ဦး (ARIF) ကဲ့သို့သော ရိုဟင်ဂျာမဟာ့မဟာအမျိုးသားပါတီများ (the Rohingya Super Nationalist Parties) ကို ဖော်ပြသင့်သည်။ ဤအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်များကို ပါကစ္စတန်နှင့်အာဖကန်နစ္စတန်နိုင်ငံများသို့ ပို့လွှတ်ပြီး အယ်လ်ကိုင်ဒါဟစ်ဇ်အီးအစ်စလာမီမူဂျာဟစ်ဒီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့(Al-Qeada Hizb-e-Islami Mujahideen)နှင့် တာလီဘန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့(the Taliban)တို့နှင့်တွဲ၍ လက်နက်ကြီးများနှင့် ဖောက်ခွဲပစ္စည်းများသင်တန်း ကိုတက်ရောက်စေသည်။ (၂၀၁၁) ခုနှစ်၊ မတ်လက မောင်တောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ တောနက်အတွင်းတွင် တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ဗုံးလုပ်နည်းသင်တန်းအပြီး အရေအတွက် (၈၀) နှင့် (၁၀၀) အကြားရှိသော ရိုဟင်ဂျာများကို ဖမ်းမိခဲ့သည်။
(၁၁း၂၅) ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် မူဆလင်လူအုပ်စုကြီးတစ်စုက မောင်တောမြို့လယ်၏လမ်းများ ပေါ်သို့ ဒလဟောထွက်လာကြပြီး ရန်ပြုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ပြတင်းပေါက်များကို ရိုက်ခွဲခြင်းတို့ကို ပြထားသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အချက်ပေးသေနတ်ကို မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ပြီးမှ ဤသို့သောမြင်ကွင်းမျိုး ဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းလား၊ သို့တည်းမဟုတ် ထိုသို့ သေနတ်ကို မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ခင် ဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းလား ဆိုသည်မှာ မသေချာကြောင်း နောက်ခံစကားပြောသူက ပြောသည်။ အယ်လ်ဂျာဇီးရားသတင်းဌာနအနေဖြင့် ဤအချက်အပေါ်တွင် တမင်တကာ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်သွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လူအများက ဤဖြစ်ရပ်တစ်ခုလုံးကို ရခိုင်များကသာ စတင်ခဲ့သည်ဟု တွေးထင်သွားပေလိမ့်မည်။ မူဆလင်များက လမ်းပေါ်မှ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အိမ်နှင့်ဆိုင်များကိုမီးရှိူ့ခြင်း၊ ဆူပူသောင်းကျန်ခြင်းတို့ စတင်လုပ်ဆောင်ကြပြီးနောက်မှ ရဲများက အချက်ပေးသေနတ် ပစ်ဖောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အချက်ပေးသေနတ် မပစ်ဖောက်မီအချိန်တွင် အမျိုးသားများက သူတို့၏ ‘မြင့်မြတ်လှပါသည်ဆိုသော’ ဗလီများအတွင်းမှ သစ်သားတုတ်ရှည်ကြီးများကို ကိုင်ဆောင်လျှက် ကန်ပေါင်ကျိုးသွားသောရေကန်မှ ရေများ ဒလဟော စီးထွက်လာကြသကဲ့သို့ ထွက်လာကြပြီး၊ သူတို့၏ ‘မြင့်မြတ်ပါသည်ဆိုသော’ ဗလီဆရာများက ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များအားလုံးကို သတ်ဖြတ်ရန် ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များ၏အိမ်များ၊ ဈေးဆိုင်များကို မီးရှို့ကြသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက် ဤသို့ လုပ်ဆောင်ပြီး၊ သူတို့၏ သန့်စင်သော မူဆလင်နိုင်ငံတစ်ခုကို ဤနေရာတွင် ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
(၁၄း၄၀) ဗီဒီယိုဖိုင်အရ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူမကို အမျိုးသားအယောက် (၂၀) က ၀ိုင်း၍ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။ သို့သော် သူမနှင့်ပတ်သက်၍ အတုအယောင်တစ်ခုခု ရှိနေပုံရပါသည်။ မိမိအနေဖြင့် ဤသို့သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သာမန်ဆိုလျှင် ယုံကြည်မိပေမည်။ သို့သော် ဤအမျိုးသမီးသည် မိမိအတွက် လုံးဝ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေပါသည်။ (အကြောင်းမှာ) သူမသည် ကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်လွန်းနေပြီး၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုလည်း မရှိသောကြောင့် လူလိမ်လူကောက်ဇာတ်ကားတစ်ကားထဲမှ ဇာတ်ကွက်တစ်ကွက်တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသော မင်းသမီးတစ်ယောက်နှင့်သာ တူနေတော့သည်။ ထို့နောက် သူတို့က သူမသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအချိန်တွင် မည်သူမျှ သူမကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းမပြုနိုင်တော့ပေ။
(၂၀း၁၀) ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ‘မောင်လေးတစ်ယောက်က အပြင်ဘက်ကို ထွက်သွားတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလို ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းက ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက သူ့ကို ရန်ပြုတိုက်ခိုက်ပြီး အပိုင်းပိုင်းအစစ ခုတ်ထစ်အသတ်ခံရပါတယ်။’ ဟူ၍ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ပြောသည်။ ထိုအချက်မှာ သက်သေအထောက်အထား တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ယုံကြည်ဖို့ အလွန်အမင်း ခက်ခဲလှပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မိမိကိုယ်တိုင်၏ အတွေ့အကြုံအရ ဤအခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပျက်တတ်သည် ဆိုသောအချက်ကို ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်ဖို့ အထောက်အထား သက်သေတစ်စုံတစ်ရာမှ မတွေ့မြင်ဖူးခဲ့ပါ။
ရိုဟင်ဂျာများသည် ရခိုင်ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များကို သတ်ဖြတ်သည့်အကြောင်းကိုသာ ပြောကြသည်။ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လေးစားသမှုဖြင့် သဟဇာတကျကျ အတူတကွ နေထိုင်တတ်အောင်ကား မကြိုးစားကြပေ။
(၁၈း၅၀) ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ‘သမီးသာ ဒီထက်အသက်ကြီးခဲ့မယ် ဆိုရင် အဲဒီရခိုင်သားတွေကို သတ်ပစ်ခဲ့မှာပဲ။’ ဟူ၍ ပြောသည်။
(၂၀း၃၅) ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးက သူနှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများက ဗမာလူမျိုး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း(၄)ယောက်၊ (၅)ယောက်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။
(၂၀း၄၀) ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် မိခင်တစ်ဦးက သူမ၏သားငယ်အကြာင်းကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ပြောသွားသည်။ သူမ၏သားမှာ (ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင် မောင်တောမြို့၌) ရခိုင်များကို တိုက်ခိုက်ရန် တားမနိုင်ဆီးမရ ထွက်သွားပြီး၊ (ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသော ဟန်ပန်ဖြင့်) ရခိုင် (၂) ယောက်ကို သတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း ပြောသည်။
ဤသို့ပြောဆိုပေးရန် ရခိုင်ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တစ်ယောက်ယောက်ကို သူတို့ရှာဖွေရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ရှာမတွေ့ဖြစ်သွားခဲ့သည်ဟု စာရေးသူထင်ပါသည်။
စာရေးသူအနေဖြင့် ဆက်လက်ရှင်းပြနိုင်ပါသေးသည်။ ရှင်းစရာလည်း ကျန်နေပါသေးသည်။ သို့သော် ဤမှတ်တမ်းဗီဒီယို၏ဘက်လိုက်မှုကို ပြသရန် ဤမျှဖြင့် လုံလောက်ပြီဟု ထင်မြင်ပါသည်။
(မူရင်းစာရေးသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပါသည်။ အမှားပါလျင် ထောက်ပြဝေဖန်ပေးစေလိုပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ များများ ရှယ်ပေးကြပါ။ မူရင်းစာရေးသူနှင့် အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။)
Hidden Genocide ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုရန် Linkး
Posted by Eagle info dash at 08:25 No comments:
Posted by Eagle info dash at 07:47 No comments:
Wikileak telling truth about so called Rohingya
Posted by Eagle info dash at 14:34 No comments:
1 RAKHINE AND MYANMAR SECURITY CHALLENGES
Rakhine and Myanmar Security Challenges by Han Maung
Posted by Eagle info dash at 13:37 No comments:
CONSPIRACY OF TERRORISTS TO CREATE AN INDEPENDENT STATE OUT OF ARAKAN (RAKHINE) STATE IN MYANMAR AND SOME D... by Han Maung
Posted by Eagle info dash at 13:32 No comments:
Labels: Bagali, Politic
Hidden agenda of so-called “Rohingya” or “Chittagonian Bengali”
Hidden Agenda of So-called Rohingya by Han Maung
Posted by Eagle info dash at 13:19 No comments:
A friend’s appeal to Britain and United States by David Obama
tags: Americans-British Association Press., Burma, David Obama, Human Rights, Myanmar, Rakhine, Rohingya, Terrorist Bengali
By David Obama
(Commentary) – The massacre in Arakan State by Islamic Extremist Terrorist Bengali so-called Rohingya over the past two weeks has caused disillusion for some, division among many, and shock and anguish for everyone. Racial and religious tensions that have simmered just beneath the surface for years have exploded into an ugly cycle of destruction and revenge which threatens to derail Burma’s journey towards democracy and peace.
Crude, racist abuse, deliberate misrepresentations, doctored images, misinformation and biased reporting of so-called Rohingya Bengali have addedacruel twist to an already bloody tragedy.
Some people may call me biased, and to that charge I plead guilty. But I am biased not in favour of one community over another, in favour of one race or religion over another, in favour of one particular political party over another. Instead, I am biased in favour of the universal values of human rights, including religious freedom and I am in favour of sovereignty and I am in favour of opposing terrorists and I am in favour of rule of law and I am in favour of enforcing immigration laws.
The tragedy in Arakan State is that ordinary people from Rakhine communities have suffered. Homes burned, Buddhist monasteries desecrated, women raped, people killed – and for what purpose? It has been claimed that as many as 30,000 people are displaced asaresult of the violence, although this figure is not verified because the UN has vacated its staff and independent monitors have not had access to the area. One of the first things the government of Burma should do is enforcing immigration laws to disperse illegal immigrants entering Burma and to deport them to original country.
I am writing this asafriend of Burma and all of Burma’s people. I have worked for the cause of freedom, democracy and human rights in Burma for the past 25 years, and travelled more than 100 times inside the country and to all its borders. I have been working for democratisation of Burma with all the ethnic people of Burma including Karen, Karenni, Shan, Mon, Kachin, Chin, Rakhine, Bamar and Shan. I also write as someone with extensive experience of other countries where religious intolerance is growing, often from extremist Islamism: Afghanistan, Indonesia, Pakistan and The Maldives, in particular.
And so with that background, I appeal to the governments around the world and people of Burma especially Burmese and international media not only to stop broadcasting biased news siding with so-called Rohingya Bengali Islamic Extremist Terrorists but also to respect ethnical media code of conduct and avoid taking under table money writing in favour of articles for so-called Rohingya Bengali Islamic Extremist Terrorists. They must stop Islamophilia and promoting religious intolerance and racial hatred which have come to the fore in the past few weeks. I appeal to the people of free world especially people of UK, USA and supporters around the world to see true to everything that is good and noble in Burmese and Buddhist culture, and to see reality to the values of freedom and human rights for which they have been struggling. I make this appeal on several grounds.
First, I appeal to human conscience on the grounds of humanity and human rights. The Universal Declaration of Human Rights is exactly that: universal, for everyone. As Daw Aung San Suu Kyi said in her Nobel Peace Prize Lecture last Saturday, human rights are “the birthright of all”. No human being should be degraded, restricted or abused in the way the people of Burma have been by the military regime for so long and that includes Arakan.
Second, I appeal on religious grounds. From my basic understanding of Islam, I know that there isauniversal Muslim greeting called “Salaam alaykum,” (“Peace be with you”). In Burmese Buddhist’s faith, people learnt from the very young age that showing “Metta or Impassionate Love” toward all the living beings. In Christianity, we are also taught to “love your enemies.” But, Rohingya Bengali Islamic Extremist Terrorists are killing peaceful Buddhist, Chyristian, Hindu Burmese and Arakan people.
If what I have said so far has not upset some, what I am about to say will upset others, but I must say it anyway. The Rohingya people are among the most Extremists and Radical people I have ever come across. I have visited Maung Dtaw, Buu Thee Taung and Yathe Taung where Arakanese Buddhist are living for centuries and seen the anxiety in their eyes. I have met Arakan villagers, and seen the worry in their hearts. The Arakan I know are among the most hospitable, kind, gentle, decent, tolerant, peace-loving human beings I have ever met. They have clung on to human decency, even when others have tried to torch their villages, massacring their Arakan people but they had shown their love of humanity.
But I also know there isadanger ahead if they continue to be massacred and genocide not only by the Bengali Rohingya, but by Biased Media Society as well as Corrupted so-called Human Rights organisation, and it is this: the danger of radicalization.
Since Rohingyas ‘terrorist’ are massacring Arakan Burmese Buddhist without any foundation or substance but fuelled by Religious extremists and greediness. But it could beaself-fulfilling prophecy. If the Arakans are persecuted by the regime, marginalized by the Burmese media, discriminated against and attacked by Islamic society and ignored by the international media, if radical Nationalist organizations tap into the seething despair among the Arakan people, and the Arakan feel they have nowhere else to turn, then it is possible that more Arakan could be radicalized. Having seen radical Nationalism in action in Russia, China, The North Korea and on the streets of London, to name justafew places, I fear for Burma if it is added to its woes. I am not talking about bombs and hijackings. I am talking about the ideology of political Nationalism.
Marginalization and protectlessness could beabreeding ground for nationalism. As Aung San Suu Kyi said in Oslo, “War is not the only arena where peace is done to death. Wherever suffering is ignored, there will be the seeds of conflict, for suffering degrades and embitters and enrages.”
Don’t misunderstand me. What I have said must not be used to justify attacks on the Arakan. Indeed, quite the opposite. To avoid provoking Arakan Nationalism, the whole people of Burma should work with moderate-minded Arakan whose only desire is to be protected their lives as others, to be treated with respect and dignity, to live in peace. One of Arakan several years ago described his vision beautifully to me when he described Burma asagarden, in which various different flowers grow – and the Arakan are one of those flowers and Rohingya isasnail trying to destroy the beautiful flower.
There are two myths about the Arakan that need to be dispelled. The first is the idea that Arakan simply hate Rohingya Bengali. Arakan do not like the Rohingya simply because these aliens Rohingya Bengali people forcefully robbing the Arakan lands by terrorizing such as torching fires on Arakan villages, massacring Buddhists and raping Arakan women.
The Arakan do not hate other people baselessly, but they won’t hesitate to defend their land, their family and their children. They just want to be protected as citizens of Burma. Even if they were attacked by Islamic Extremist Bengali Rohingya Terrorists, there are no proper armed forces to protect them in Buu Thee Taung, Yathe Taung and Maung Taw area of Arakan where Burma shares the border with Bengali Bangladesh. As long as Arakan are not protected them with assurance combined together with practical action, the terrorist threat of Rohingya Bengali Islamic Extremist won’t stop.
The second point is that Rohingya are part of Arakan. This is totally wrong. The so-called Rohingya are Bengali illegal immigrants. To prove this I have several reasons. The historical record is clear that the Rohingyas have never lived in northern Arakan for generations. Scholars can debate the precise record with civility and evidence and no one can doubt that they haven’t been there for generations.
But for the good side, Ko Ko Gyi led 88-Generation students are giving strong and firm leadership to people of Burma and people around the world. The 88 Generation Students Leaders clearly stated clearly that “Rohingyas are absolutely notanationality of Burma. We absolutely do not accept the interfering intrusion by the international community without their full understanding of the domestic affairs of Burma; we consider it to beaviolation to the sovereignty of our country. We will not agree to, nor comply with, nor accept them as destitute refugees, nor placate and appease the pressures of the international community.
We would like to press here thatalot of the illegal immigrants can speak the language of the host country very fluently. Even though Rohingya are from Bangladesh, they can learn to speak Burmese fluently and can have Burmese names? Even in USA,alot of the Burmese have English names. Bangladesh refuses them to give refuge Rohingya Bengali because they are practicing Stalin like policy — shoot to kill anyone who flees from battle front line. Even they are immigrants from Bangladesh, they do wish to stay in Burma and make it their homeland, because it is their way of colonization and Islamnization of Burma where they exploit Burma crisis, and terrorizing Arakan people.
Bengali Rohingyas flee severe poverty, extreme weather, land shortages and population booming of Bangladesh to places of prosperity and freedom – Burma, India and around the world. Do not forget that Bangladesh is ¼ the size of Burma and4times the size of population of Burma. Additions, these Rohingya Bengali Terrorists have the hidden agenda of Islamnization of Burma where they wishfully day dreaming of ruling Burma with strict Islamic Sharia laws.
Some British have told me that due to beaporous border, so they accept the facts that some who claim to be ‘Rohingya’ may be illegal Bengali immigrants. They went on argue to give Burmese citizenship to those who were born in Burma regardless. The fact is that Rohingya are illegal immigrants and they are asking for the ethnic rights which we cannot give. Even to be the citizen, we cannot give away Burmese citizenship easily to everyone whoever enters into Burma illegally. We must clearly, precisely and strictly define our citizenship laws and firmly implement immigration policies.
Burma’s Arakan crisis has bornanew hero — Ko Ko Gyi. So it is time for everyone, in Burma and in the international community, who cares about universal human rights, human dignity and peace, who cares about national security and national interest to stand up and put an end to the violence, to stand up and to put an end on Rohingya Bengali terrorist attacks and begin the long hard road to reconstruction and reconciliation. Let that be the way forward, for Arakan, Kachin, Karen, Shan, Chin, Mon and Bamar, for government official and for Burmese citizen and foreign friends of Burma alike to be united under the leadership of Ko Ko Gyi working for better, prosper and safer Burma.
David Obama is the British-American Campaigner working for Burma for more than two decades. His book True Stripe Appear in NGOs & Media Society will be released this week from We Americans-British Association Press.
Source: received from inside Burma.
THANKS FOR BURMESE TRANSLATION
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂-ခုနှစ် ဇွန်လ ဘင်္ဂါလီ ဆူပူမှုဖြစ်ခါစလောက်က (တိတိကျကျ ပြောရရင် ၂၀၁၂-ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက် နေ့စွဲ နဲ့) ဒေးဗစ်အိုဘားမား (David Obama) ဆိုသူ ဗြိတိသျှနွယ်ဖွား အမေရိကန်လူမျိုး တစ်ယောက် ရေးတဲ့ “A friend’s appeal to Britain and United States” ဆောင်းပါး ထဲက ကောက်နှုတ်ချက် အချို့ကို အောက်မှာ ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ကုလားတွေဆီမှာ ရောင်းစားပြီးတော့ ဘဏ္ဍာငွေရှာကြသူတွေထဲမှာ ဘယ်သူ တွေ ပါနေကြသလဲ ဆိုတာကို အဲသည်ဆောင်းပါးရဲ့ အောက်ပါအပိုင်းမှာ စာရင်းချပြ ထားတယ်။
“တစ်လိမ် နှစ်လိမ် ပွေလိမ်ရှုပ်တယ်၊ လူလိမ်ကြီးပေါ့ကွယ်၊ ပျိုပျိုမေကို မချစ်ပါဘဲနဲ့ ယုံအောင်ချွဲတတ်တယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသား နဲ့ အညီ ကျွန်မတို့ရဲ့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်ခင်သူအပေါင်းအား အောက်ပါစာရင်းတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
(ဒေးဗစ် အိုဘားမား ရေးသားသည်။
ကျွန်တော် ပထမဆုံး ဆွဲထုတ်ပြရမယ့်သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး သမ္မတ စ၀်ရွှေသိုက် ရဲ့ သား ဟန်ညောင်ဝေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ညောင်ဝေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုက်ဆံနဲ့ရောင်းစားလို့ရအောင် ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာ The Euro-Burma Office (EBO) ဆိုတာကို တည်ထောင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ) ဆိုသူတွေအရေး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြပ်အတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာ တာဝန်အရှိဆုံး လူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ်လူမျိုး ဘဏ္ဍာငွေ ထောက်ပံ့သူတွေကို သူ့ဘက်က ဘယ်လိုအာမခံထားသလဲ ဆိုတော့ တကယ်လို့များ သူဟာ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေကို ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားထဲမှာ စာရင်းပေါက်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေမယ် လို့ အာမခံထားတယ် လို့တောင် ဆိုကြပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနုဟာ အာဏာကိုဖက်တွယ်နိုင်ဖို့ အလို့ငှာ မဆိုစလောက်မဲပြား လေးငါးခြောက်ပြား ရဖို့ အတွက် ယခုထက်တိုင်အငြင်းပွားရတဲ့ “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးစွဲခဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ ဒီနေ့ထက်ထိ ဖြေရှင်းလို့ မပြီးနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ (အခု ဇွန်လ အရေးအခင်းက စပြီး) ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားဟောင်း တွေက ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ ဦးဆောင်မှု နဲ့ အမျိုးသားရေးရပ်တည်ချက်နဲ့ ကုလားတွေရဲ့ အလိမ်အညာ သမိုင်းပုံပြင်တွေ ကို တိုက်ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့အခါကျမှ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ တွေရဲ့ ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာရက်စက်မှုတွေ ၊ အစ္စလမ္မစ်အစွန်းရောက် လှုပ်ရှားမှုတွေ နဲ့ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဗူးပေါ်သလို ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး သမ္မတ စ၀်ရွှေသိုက်ရဲ့သား ဟန်ညောင်ဝေဟာ ဖရန်စစ်ဝေးဒ် (Francis Wade) ဆိုတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကို ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီတွေအတွက် မီဒီယာဝါဒဖြန့်ချိရေး အလို့ငှာ ခန့်အပ် စေခိုင်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟန်ညောင်ဝေဟာ (သူဦးဆောင်နေတဲ့) ဒီဗွီဘီ (DVB) သတင်းဌာနကို ၀ါဒဖြန့်ချိရေးလက်နက်အဖြစ် အသုံးချပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တောက်လျှောက် အကြပ်အတည်းထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီတွေ အရေးလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်တယ် ဆိုပြီးတော့ တောက်လျှောက် ကမ္ဘာက သိလာမြင်လာအောင် လုပ်နေခဲ့ လုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်။
အဲ . . . ၊ အမေရိက က ဇာတ်လိုက်ကျော်တွေဖြစ်တဲ့ အောင်ဒင် နဲ့ သူ့ရဲ့ US Campaign for Burma (USCB) ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ မြန်မာပြည်ကို ပိုက်ဆံနဲ့ ရောင်းစားနေပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ လူဆိုးလူယုတ်မာတွေဖြစ်ပြီးတော့ ရိုဟင်ဂျာ ကုလားဘင်္ဂါလီတွေဟာ မတရားခံကြရသူတွေပမာ ပုံဖော်ခြင်းအားဖြင့် ရခိုင်ပြည်ကို သစ္စာဖောက်ပါတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့ အမှန်တရားကတော့ သူတို့ပြောနေတာနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
ယူကေ (ဗြိတိန်) မှာ ဆိုရင်၊ ဘားမားကန်ပိန်းယူကေ (Burma Campaign UK) က မာ့ခ် ဖာမာနာ (Mark Farmaner) နဲ့ သူ့ရဲ့ ဒုတိယဇနီး ဇိုယာဖန် (Zoya Phan) တို့ဟာ အခကြေးငွေရယူပြီးသကာလ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂါလီတွေအတွက် ကျားကုတ်ကျားခဲ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလုပ်နေပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ရည်းစား (boyfriend) ဖြစ်တော်မူသော ဘန်နီဒစ်ရောဂျားစ် (Benedict Rogers) ဆိုသူကတော့ ဘာမားကန်ပိန်းယူကေ က ဘယ်လိုအလိမ်အညာတွေ ပြောပြော ဘယ်လို ကိုယ်ကိုယ်ကို ဂုဏ်တင်တာမျိုးလုပ်လုပ် တစ်သဝေမတိမ်း ပုံတူကူး သံယောင်လိုက် ပေးပါတယ်။ သူတို့လင်မယားရဲ့ ရည်းစား ဘန်နီဒစ်ရောဂျားစ် အလုပ်လုပ်တဲ့ အဖွဲ့ကတော့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယန် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (Christian Solidarity Worldwide) လို့ အမည်ခံထား ပါတယ်။ ကျက်သရေမရှိတဲ့ မောင်ဇာနီ (Maung Zar Ni) ဟာ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီတွေကို သူ့သမီးကို ပေးထားရတဲ့ သူ့သမက်တွေ ပမာ ထောပနာပြု အကာအကွယ်ပေး အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လုပ်နေပါ တယ်။
နောက်တစ်ဖန်၊ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်မှာ Forum for Democracy in Burma (FDB) အမည်ခံအဖွဲ့က စိုးအောင် နဲ့ နိုင်အောင် ဆိုသူတွေရှိကြပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ တန်းတူညီမျှမှု ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေအောက်က ပေးတဲ့ ရံပုံငွေတွေကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် စိုးအောင် နဲ့ နိုင်အောင် တို့ဟာ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီတွေအရေးကို ထောက်ခံလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။
ကဲ . . . ၊ ဒီလောက်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို အစ္စလမ်ဇာတ်သွင်းပြီး ကိုလိုနီပြုဖို့ အတွက် ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေက ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပြီး ဘယ်လိုအကွက်ချ လုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်သာလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
မြေပုံကို ချခင်းပြီး စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုလုံးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ (ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ) နိုင်ငံမဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ အရေးလှုပ်ရှားသူများ အားလုံးရဲ့ အခေါင်အချုပ်ကြီးကတော့ Arakan Project ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ်စ်လျူဝါ (Chris Lewa) ဖြစ်နေပါတယ်။ ခရစ်စ်လျူဝါ ဟာ နိုင်ငံမဲ့ နဲ့ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီတွေအရေးအတွက် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အရေးဆို လော်ဘီလုပ် လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် ရခိုင်ပရောဂျက် (Arakan Project) အမည်ခံအဖွဲ့အတွက် ရံပုံငွေတွေကို ခရစ်စ်လျူဝါတစ်ယောက် ရှာခဲ့ ရှာဆဲဖြစ်သော်ငြားလည်း ခရစ်စ်လျူဝါဟာ Arakan Project နာမည်အောက်မှာ ရခိုင် (၀ါ) Arakanese လူမျိုးတွေအတွက် ဘာမှ လုပ်မပေးဖူးဘဲ၊ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ခိုးဝင် နဲ့ နိုင်ငံမဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေအတွက်ပဲ တောက်လျှောက် လုပ်ပေးလာခဲ့ကြတယ်။ လောကကြီးဟာ အင်မတန်မှ တရားကျဖွယ် စိတ်ဓါတ်ကျဖွယ် ကောင်းလှပါတော့တယ်။
(အယ်ဒီတာ့မှတ်စု။ ။မူရင်းစာရေးသူ ဒေးဗစ်အိုဘားမား ဖော်ပြခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုကတော့ ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၈၈ ကျောင်းသား ဦးမြအေးရဲ့ သမီး ဝေနှင်းပွင့်သုန် တစ်ယောက် ဒီစာရင်းမှာ စာရင်းမပေါက်သေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အောက်မှာ ဆောင်းပါးရဲ့ မူရင်းစာသားကို ဖော်ပြထားပြီး၊ ဆောင်းပါး တစ်ခုလုံးကို ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့နေရာကို အောက်ဆုံးမှာ လင့်ခ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးအပိုင်းကလေးမှာ ပါရှိတာတွေဟာ မူရင်းစာရေးသူရဲ့ အာဘော်သာဖြစ်ပြီး ယုသန္တာခင်ဟာ ဘာသာပြန်သူ သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။)
Labels: Article, Bagali, Politic
ရခိုင်သမိုင်းမြောက်ဦးဘုရင်သဇာတသည် မူဆလင်ဖြစ်သည်ဟု ဘင်္ဂလီလူမျိုးတို့က သွယ်ဝိုက်ကာ လုပ်ကြံစွပ်စွဲထားသည် ကို ငြင်းဆိုချက်စာတမ်း
စစ်တကောင်း အနွယ်ဝင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်း သား/နိုင်ငံသားများအဖြစ်ခံ ယူရရှိလိုသည့်အတွက် နီးစပ်ရာ ရခိုင်သမိုင်း ထဲမှ အချက်အလက်အချို့ကိုယူ၍ သူတို့၏ သမိုင်း ဖြစ်ဖန်တီး ရေးသားကာ၊ အများပြည်သူရှေ့မှောက်သို့ တင်ပြလာခဲ့ကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါပြီ။
ယခုလည်း အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက် တစ်ပါတီမှ နိုင်ငံတော်သို့ တင်ပြသော “ ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင် ကြသော ဒေသခံအစ္စ လာမ် ဘာသာဝင်များသည် ဥပဒေကြောင်းအရ လည်းကောင်း၊ သဘာဝ အလျောက် မွေးရာပါနိုင်ငံသားများဖြစ်၍ လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တိုင်းရင်းသား /နိုင်ငံသား များဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြသည့် စာတမ်း”၏ စာမျက်နှာ (၃၁) နှင့် ပူးတွဲ(၂၅) (နောက်ဆက်တွဲ- ၁ ဖြင့် ဖော်ပြထား ပါသည်) တို့တွင် ရခိုင်သမိုင်း မြောက်ဦးခေတ်၏ (၁၁)ဆက်မြောက်ဘုရင် သဇာတမင်းအား အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူအဖြစ် သွယ်ဝိုက်၍ လုပ်ကြံစွပ်စွဲထားပါသည်။ မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းကို စကြာဝဠါ ကုန်လွန်သည်အထိ ဆက်ဆွဲပါသော်လည်း မည်သည့်အခါတွင်မှ ဆုံတွေ့နိုင် စရာအကြောင်း လုံးဝမရှိ။ ထို့အတူ ရခိုင်လူမျိုးတို့သည် မည်သည့်အခါတွင်မှ မူဆလင် ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်း လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိပါ။
- ရခိုင်လူမျိုးအားလုံးသည် မြတ်ဗုဒ္ခ ဓည၀တီပြည်သို့ ကြွရောက်လာ
သည့် ဘီစီ (၅၇၀)ခန့်မှစ၍ ယနေ့တိုင် မွေးရာပါ ဗုဒ္ခဘာသာဝင်
များဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို နှလုံးစိတ်ဝမ်း
ထဲမှပင် သက်ဝင်ယုံကြည်သူများသာ ဖြစ်ကြသည်။
- ဗုဒ္ခဘာသာဝင်မဟုတ်လျှင် ရခိုင်လူမျိုး လုံးဝမဟုတ်။
- ထို့အတူ ရခိုင်လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသော ရခိုင်ဘုရင်များအားလုံး သည်လည်း ဘီစီ (၅၇၀) ခန့်မှစ၍ မွေးရာပါ ဗုဒ္ခဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို ခိုင်မာစွာ သက်ဝင်ယုံကြည် သူများသာ ဖြစ်ကြသည်။
ရခိုင်ဘုရင်တို့သည် နန်းတက်မည်ဆိုလျှင် မဟာကျိန်ဘုရား ကို ခေါင်းပေါ်ရွက်၍လည်းကောင်း၊ မဟာကျိန်ဘုရားရှေ့မှောက်တွင် ၀ပ်တွားဦးတင်၍လည်းကောင်း ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုကြရပါသည်။ သို့မှသာ နန်းတက် မင်းပြုခွင့် ရှိပါသည်။ ထို့နောက် မင်းဆရာသံဃရာဇာတို့၏ ခွင့်ပြုချက် လမ်းညွန်ချက်တို့ဖြင့် ဘိသိက်ခံကြရသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဗုဒ္ခဘာသာဝင်မဟုတ်လျှင် ရခိုင်ဘုရင်ဖြစ်ခွင့် လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိပါ။
ရခိုင်သမိုင်းခေတ်ကြီး(၄)ခေတ်ကို ခြုံငုံလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လျှင် ဓည၀တီရခိုင်ပြည်ကြီးကို ဘာသာ ခြား ဘုရင်တစ်ပါးတလေမှ အုပ်ချုပ်ပိုင်စိုးခဲ့ခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိခဲ့ဖူးပါ။ အားလုံးအသိပင်ဖြစ် သည်။ ဗုဒ္ခသာ သနာတော်သည်လည်း ရခိုင်သမိုင်းတလျှောက် ရခိုင်ပြည်နယ် တ၀ှမ်းလုံးတွင် မည်သည့်နေရာတွင်မှ မည်သည့်အချိန် တွင်မှ မှေးမှိန်ခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိခဲ့ဖူးပါ။
ဘဂါင်္လီတို့သည် သူတို့၏ စတိုင်အရ မူဆလင်ဘွဲ့ခံ မြောက်ဦးဘုရင် (၁၃)ပါးကို မူဆလင်ဟု ယခင်က စွပ်စွဲ ခဲ့ဖူးပါသည်။ ရခိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့(ရန်ကုန်)၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာတမ်းတွင် ထိုရခိုင် ဘုရင် (၁၃) ပါးသည် မူဆလင်များလုံးဝ မဟုတ်ကြောင်း၊ ထိုဘုရင်တို့ တည်ထားခဲ့သော လက်ရှိ ဘုရားပုထိုးစေတီ ဂူသိမ်များကို သက်သေထား၍ ချေပထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
မြောက်ဦးဘုရင်သဇာတကို မူဆလင်ဖြစ်ကြောင်း အောက်ဖော်ပြပါ အာရဗီစာ (၂)ဘက်ထိုး ငွေဒင်္ဂါးကို သက်သေပြပြီး ဘင်္ဂါလီတို့က နောက်ဆက်တွဲ (၁) ပါ စာတမ်းအတိုင်း သွယ်ဝိုက်ကာ စွပ်စွဲလာပါသည်။
ဤဒင်္ဂါး(၂)ဘက်တွင် ရေးထိုးထားသော အာရဗီစာများကိုလည်း ဘင်္ဂါလီတို့က ထိုစာတမ်းတွင် အောက်ပါ အတိုင်း ဘာသာပြန်ဆိုဖော်ပြထားပါသည်။
ဒင်္ဂါး၏ အရှေ့ဘက်မျက်နှာစာ အဓိပ္ပါယ်
“ အလ္လာအရှင်မြတ်မှအပ မည်သည့်ဖန်ဆင်းခံမျှ ခ၀ပ်ကိုးကွယ်ခြင်းခံယူထိုက်သော အရည်အခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် ဖန်ဆင်းရှင် အလ္လာအရှင်မြတ်သာလျှင် အမှန်တကယ်ခ၀ပ်ကိုးကွယ်ခြင်း ခံယူထိုက်သော အရှင်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်မျိုးယုံကြည်ပါ၏။ တမန်တော် မူဟမ္မဒ်သည် ဖန်ဆင်းရှင် အလ္လာအရှင်မြတ် ဘက်သို့ ဖိတ်ခေါ်ရန် နှိုးဆော်သူအဖြစ် စေလွှတ်ခြင်းခံရသော နောက်ဆုံးရစူလ်တမန်တော် တစ်ပါးဖြစ် ကြောင်း ကျွန်တော်မျိုးယုံကြည်ပါ၏၊ ကျွန်တော်မျိုး၏ နိုင်ငံကို အရှင်မြတ်စောင့်ရှောက် တော်မူပါစေ”
ဒင်္ဂါး၏ နောက်ကြောဘက် မျက်နှာစာ အဓိပ္ပါယ်
“သနားကြင်နာခြင်းတို့၏ ဖခင် အယ်လ်မူဇာဖါးဆူလ်တန်အလီရှား ကျွန်တော်မျိုး၏ နိုင်ငံကို အလ္လာ အရှင်မြတ် စောင့်ရှောက်တော်မူပါစေ”
ဤဒင်္ဂါးစာများကို ယခုကဲ့သို့ ဘင်္ဂါလီတို့ ဘာသာပြန်တင်ပြလိုက် သည်ကို အလွန်ပင်ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဒင်္ဂါးပါစာအဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ယခုကဲ့သိုို့ အသေးစိတ်ဖတ်ရ သိရှိခွင့်ရသောကြောင့် ဤဒင်္ဂါး မှာ ရခိုင်ဘုရင် တစ်ဦးထုတ်ဝေခဲ့သော ဒင်္ဂါးမဟုတ်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် သဇာတ မင်းထုတ်ဝေခဲ့သောဒင်္ဂါး လုံးလုံးလျားလျား မဟုတ်ကြောင်း ပီပီပြင်ပြင် ကျွန်ုပ်တို့ သိမြင်လာ ရ၍ ဖြစ်သည်။
သို့ကြောင့် ဤဒင်္ဂါးသည် ရခိုင်ဘုရင်တစ်ဦးဦး (သို့) သဇာတမင်း ထုတ်ဝေခဲ့သောဒင်္ဂါး လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်ကြောင်း အောက်ပါအချက်အလက်များကို သက်သေထား
၍ ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းဆိုလိုက်ရပါ သည်။
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တွေ့ရှိရသော ဒင်္ဂါးတိုင်းကို ရခိုင်ဘုရင် ထုတ်ဝေခဲ့ သည်ဟု ပုံသေကားချမှတ်ယူ၍ မရပါ။ ပျူဒင်္ဂါးများနှင့် တိုင်းတပါး မှဘုရင်များ ထုတ်ဝေခဲ့သော အခြားဒင်္ဂါးများကိုလည်း ရခိုင်ပြည် နယ် တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။
၂။ ရခိုင်ဘုရင် သဇာတသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မျိုးရိုးစဉ်ဆက်မှ ဆင်းသက်လာပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို လုံးဝဥဿုံယုံကြည် သက်ဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုမင်းသာသနာပြု တည်ထားခဲ့သော
အောက်ဖော်ပြပါ ဘုရားပုထိုးစေတီများက သက်သေခံလျက် ရှိနေပါသည်။
၃။ သဇာတမင်း၏ မူဆလင်ဘွဲ့မှာ အလီသျှာဖြစ်ပြီး၊ အယ်လ်မူဇာဖား ဆူလ်တန်အလီရှား လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ဤအမည်ကို မည်သည့် ရခိုင်ရာဇ၀င်သမိုင်းတို့တွင်မှ မတွေ့ဖူးပါ။
၄။ ဘင်္ဂါလီတို့၏ စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသော သဇာတမင်း၊ အေဒီ (၁၅၂၅)တွင်၊ မြောက်ဦးနန်းတော်၌ အုပ်စိုးနေခဲ့သည်ဆိုသည်မှာ မမှန်ပါ။ ရခိုင်ရာဇ၀င်များ၊ သမိုင်းများ၊ ဒင်္ဂါးများ၊ ကျောက်စာများ၊ ပေစာများ၊ ကမ္ဗည်းစာများဖြင့် ကိုက်ညှိရေးဆွဲထားချက်အရ သဇာတမင်းသည်
အေဒီ (၁၅၁၅)မှ (၁၅၂၁) ထိသာ ထီးနန်းစိုးစံခဲ့သည်။
၅။ ရခိုင်ဘုရင်များ မူဆလင်ဘွဲ့ခံခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာလည်း မူဆလင်ဖြစ်၍ လုံးဝမဟုတ်။
အိမ်နီးချင်းမူဆလင်ဘုရင်များနှင့် ထည်ဝါစွာ ကူးလူးဆက်ဆံလို၍ဖြစ်ခြင်း၊ မဂိုဘုရင်တို့က မူဆလင်ဘွဲ့များကို ဆက်ကပ်ခဲ့၍ ဖြစ်ခြင်း၊ ဘင်္ဂါ (၁၂) မြို့ကို သိမ်းပိုက် ပိုင်စိုးနိုင်ခဲ့၍ ဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂါလီတို့ ဆိုထားသကဲ့သို့ မူဆလင်တို့၏ လက်အောက်ခံဖြစ်၍ ဟူသည်လည်း လုံးဝ (လုံးဝ) မဟုတ်ပါ။
၆။ အယ်လ်မူဇာဖားဆူလ်တန်အလီရှား ဟူသည့်အမည်သည် မူဆလင်
ဘွဲ့ခံ မြောက်ဦးဘုရင် (၁၃) ပါးစာရင်းတွင် မပါရှိပါ။ ဘင်္ဂါ(၁၂) မြို့ကို အုပ်စိုးခဲ့သော အနောက်ဘုရင် (ရခိုင်ဘုရင်ခံ) (၉) ပါးစာရင်းတွင်လည်း လုံးဝမပါရှိပါ။
မူဆလင်ဘွဲ့ခံ မြောက်ဦးဘုရင် (၁၃ )ပါးစာရင်း
က။ နရနုမင်း (ခေါ်) မင်းခရီ - အလီခင်
ခ။ ဘစောဖြူမင်း - ကလီမာသျှာ
ဂ။ မင်းဒေါလျာ (ခေါ်) မင်းသုဒ္ဓေါလျာ - မောဥသျှာ
ဃ။ ဘစောညိုမင်း - မဟာမောက်သျှာ
င။ မင်းရန်အောင် - နောရိသျှာ
စ။ စလင်္ကာသူမင်း(ခေါ်)သိင်္ဂသူမင်း - သက်ကောက်ဒေါလသျှာ
ဆ။ မင်းရာဇာ (ခေါ်) မင်းလှရာဇာ - ဣလိသျှာ
ဇ။ မင်းစောအို (ခေါ်) သီရိသူမင်း - ဇလသျှာ
ဈ။ သဇာတမင်း - အလီသျှာ
ည။မင်းဘာကြီး(ခေါ်) မင်းဘင် - ဇဘောက်သျှာ
ဋ။မင်းဖလောင်း - သီကွန်ဒါသျှာ
ဌ။မင်းရာဇာကြီး (ခေါ်) သတိုးဓမ္မရာဇာ- ဆောလိမ်သျှာ
ဍ။မင်းခမောင်း(ခေါ်)၀ရဓမ္မရာဇာ - ဥသျှောင်သျှာ
က။ မင်းစောလှ - သီရိသီရိအနောက်ဘုရင်
ခ။ မင်းညို - အီစလန်သျှာ
ဂ။ သီဟပတိ - စူလတန်ဟီလက်သျှာ
ဃ။ စင်္ကြာဝတေး - သီရိသီရိစူလမန်သျှာ
င။ အနောက်ဘုရင်မင်းရဲ - စစ်တကောင်းစူလတန်
စ။ သူပုန်မင်းရဲ - ပူဇါပါသျှာ
ဆ။ သီရိဇေယျနော်ရထာ - စစ်တကောင်းရာဇာ
ဇ။ မင်းရဲသီဟသူ - နီဇမ်သျှာ
ဈ။ မင်းရဲသင်္ခပ၀ါ - စစ်တကောင်းမူဘာရက်သျှာ
၇။ မြောက်ဦးဘုရင်တို့သည် သူတို့၏ ဆွေမျိုးရင်းရှာ သားတော်၊ ညီတော်၊ ဦးလေးတော်များကိုသာ အနောက်ဘုရင်အဖြစ် ခန့်ထားလေ့ရှိပါသည်။
၈။ ရခိုင်လူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်လျှင် ရခိုင်ထီးနန်းတွင်သော် လည်းကောင်း၊ ရခိုင်ထီးနန်းလက် အောက်တွင်သော် လည်းကောင်း ရခိုင်ဘုရင် (သို့) အနောက်ဘုရင်ဖြစ်ခွင့် လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိပါ။
အထက်က ဖော်ပြပြီးဖြစ်သော အချက်အလက်များကို ထောက်ရှု လျက် မိုးနှင့်မြေ မည်သည့်အခါမှ ထိရိုးထုံးစံ မရှိသကဲ့သို့ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ရခိုင်ဘုရင်တို့သည်လည်း မည်သည့် အခါတွင်မှ မူဆလင် မဟုတ်။
ထို့အတူ ရခိုင်ဘုရင် သဇာတမင်းသည်လည်း မူဆလင်လုံးဝမဟုတ်ဘဲ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာတော်ကို အပြည့်အ၀ ချွင်းချက်မရှိ သက်ဝင်ယုံကြည်သော သာသနာပြုမင်းတစ်ပါး သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သဇာတမင်း၏ နှလုံးသွေး ထဲတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏ အဆီအနှစ်များသာ ပျော်ဝင်စီးဆင်းနေခဲ့ကြောင်း၊ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ရခိုင်ဘုရင်များသည် အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပါန်နှင့် အနာဂါတ်ကာလတို့တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၌သာ မွေးဖွါး၊ အသက် ရှင်သန်ရပ်တည်နေထိုင်ခဲ့ကြ၊ ရပ်တည်နေထိုင်ကြဆဲ၊ ရပ်တည်နေထိုင်ကြဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လူသားအားလုံး တို့၏ ရှေ့မှောက်သို့ တင်ပြလျက် ဤစာတမ်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ရပါသည်။
PDF ဖိုင်တွင် ဓာတ်ပုံများနှင့် ရှေးဟောင်းဒဂါင်္းများနှင့် ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးများပုံကို အတူတကွ သက်သေသကာရများဖြင့် ထည့်သွင်းထားပါသည်။
Posted by Eagle info dash at 03:49 No comments:
Labels: history, သမိုင်း
= = = အစ္စလာမ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုများ = = = (၁) ဖိလိပို...
(((၈၈' ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကို မင်းကိုနိုင်မှ ရိ...
အရှေ့တောင်အာရှဒေသ အယ်ကေဒါကွန်ယက် (ဒေါက်တာ ရိုဟန် ဂ...
အယ်လ်ဂျာဇီးရား (Al Jazeera) သတင်းဌာနမှ ‘ဖုံးကွယ်ထာ...
CONSPIRACY OF TERRORISTS TO CREATE AN ...
Hidden agenda of so-called “Rohingya” or “Chittago...
A friend’s appeal to Britain and United States by ...